Mayelana NATHI - Shenzhen Eyin Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Eyin Technology co., Ltd. isungulwa ngonyaka we-2008, imboni ehamba phambili ye-Sound bar etholakala eShenzhen, eChina. Sine abasebenzi abangaphezu kuka-100, azungeze 5000 square metres isikhala ukukhiqizwa.
Sigxile ekuklameni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ibha yomsindo, izipikha zemultimedia kanye nesipikha esincane. Imikhiqizo RMS yokukhipha ibanga lamandla lisukela ku-5W liye ku-200W nangaphezulu. Imikhiqizo yethu i-CE, REACH ROHS, LVD & EMC, ERP, FCC, KC, BQB eqinisekisiwe kanti imboni yethu iyi-ISO neBSCI eqinisekisiwe.
Sine-workshop ejwayelekile, yonke imishini esezingeni eliphakeme, iqembu le-R & D eliqeqeshiwe, kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi elihle kakhulu ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo nokulethwa okusheshayo. Ngaphandle kwalokho, siqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo yethu eyingqayizivele, imfashini nokuncintisana, kuzoba nemodeli emi-5 noma eyisithupha yemikhiqizo emisha yomhlaba minyaka yonke.
Selokhu kwasungulwa, sihlala sibeka ikhwalithi nedumela endaweni ebaluleke kakhulu ukusiholela phambili. sinikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yozakwethu. sesivele sakha ubudlelwano bebhizinisi obunobungani namakhasimende eYurophu, e-USA, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Afrika, empumalanga Ephakathi nase-Asia.
Samukela ngemfudumalo yonke imibuzo enombono evela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze ibambisane nathi, futhi sibheke phambili ukubhala kwakho.
Ibha yomsindo yeKaraoke, I-Wifi Soundbar YeTv, Amabha Womsindo we-Tv, Ibha yomsindo ye-Alexa, Tv Futhi Soundbar Mount, Izikhulumi ze-Wifi Soundbar,